Maitiro ekupinza yako Spotify playlists kuApple Music | Ndinobva mac
Maitiro ekupinza yako Spotify playlists kuApple Music
Yakafananidzwa | | Apple Music, Tutorials
Musi waJune 30, sevhisi yemimhanzi yeapuro yakatanga, Apple Music, uye kune vazhinji vashandisi veSpotify vakasarudza sevhisi iyi idambudziko rekutangazve zvinyorwa, zvimwe zvacho nemazana nemazana enziyo. Neraki chirongwa chitsva, SongShift, zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kwauri.
Yako Spotify playlists kuApple Music nyore
SongShift chirongwa chinowanikwa muApp Store icho chinokutendera iwe tora ese ako Spotify playlists kuApple Music nenzira yakapusa, inokurumidza uye inoshanda. Ehezve, zvichave zvakafanira kuti nziyo dzaunounza dziri mukushandira kwebhokisi kana zvisiri, sezvaunonzwisisa, hazvigoneke.
Iyo zvakare yemahara app, kunyangwe iine mimwe miganho. Kana zvinyorwa zvako zvisina nziyo dzinodarika zana unenge wakwana asi kana uchida kupinza playlist iyo inosanganisa inopfuura 100 nziyo iwe yauchazofanira kubhadhara € 1,99, uye kana iwe uchida kubvisa kushambadza, € 0,99. Asi ngatitarisei pazvinhu zvakakosha. maitiro ekupinza ako Spotify playlists kuApple Music.
Tisati tatanga, chimwe chinhu chakakosha: SongShift haibvumiri kugadzira zvinyorwa zvitsva mu Apple MusicIngorekodha nziyo kubva pane imwe sevhisi kuenda kune imwe, nekudaro, iwe unofanirwa kutanga wagadzira runyorwa mune yeapple service Kuti uite izvi, vhura iyo Music app uye sarudza "My Music" → "New List".
Dhawunirodha app SongShift muApp Store.
Vhura iyo app, rova ​​"Start Import" uye uipe iyo mukana weApple Music muhwindo rinobuda.
Pinda iyo yekuwana data kune yako Spotify account uye upe iyo app mvumo yekuwana.
Sarudza runyorwa rwekutamba iwe rwaunoda kuunza uye sarudza "Tumira Mune Rondedzero".
Zvino sarudza iyo Apple Music playlist kwaunoda kuti dzese nziyo kubva kuSpotify playlist ipinzwe uye maitiro acho anotanga.
Dzokorora maitiro acho nezvako zvese playlist kubva Spotify uye ichakurumidza kuwanikwa paApple Music.
Uye kana paine kusahadzika, heino kuratidzwa vhidhiyo yakaitwa nevakomana kubva 9to5Mac:
Nenzira, hauna kuteerera here chikamu cheApple Talkings, iyo Applelised podcast futi? Uye zvino, shinga kuteerera zvakare Iyo Yakaipisisa Podcast, chirongwa chitsva chakagadzirwa naApplelizados vapepeti Ayoze Sánchez naJose Alfocea.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Maitiro ekupinza yako Spotify playlists kuApple Music
Hacker inokwanisa kuisa Windows 95 pane Apple Watch
Peji reApple rekutsigira rinozogadziriswazve